Маша Кэш: INDLELA YOKWENZA KANYE NOKUPHILA KWENKQUBO YOMFONI NEMITHETHO YAKHO?
INDLELA YOKWENZA KANYE NOKUPHILA KWENKQUBO YOMFONI NEMITHETHO YAKHO?
Iimonons zamanxibelelwano zanamhlanje zikulungele ukukholisa iindwendwe zabo ngeendlela ezininzi zokufakela iifowuni zeefowuni, ezijoliswe ekuneliseni nasiphi na izicelo kunye nokuthanda. Ngelishwa, xa kuziwa ekukhetheni i-boot, abathengi abaninzi bajongene neendlela ezizodwa ezingafani nakunye. Kwizinto ezinjalo, iimpawu zobuntu ezingaqhelekanga eziqhelekileyo ukuphuma kwisihlwele aziyi kuthobela ingqalelo. Ukuba ufuna ukuthwala yakho ifowuni yomnxeba kwimeko yokuqala, engabikho mntu uphinde uyaphinda, unokwenza into yakho. Namhlanje ndifuna ukukubonisa indlela okunokwenzeka ngayo ukwenza iimbobo kwifowuni ngoncedo lweglue eqhelekileyo. Siqala ukudala ubuhle kwiqela eliqhelekileyo.
• i-glue evuthayo; • ifilimu yokutya; • ubuhle bokuzibumba;
Indlela yokwenza isembozo ngezandla zakho.
Ndiyifumana ifilimu yokutya kwaye ndifake ifowuni yam ifowuni kuyo. Ifilimu yokutya ihamba kakuhle kwaye ihambelana kakuhle ne-smartphone kwaye ilandelelwe kakuhle.
Umpu weglue kwi-contour, kwisangqa, ubeke umgca weglue. Senza iindawo ezisecaleni zekhava. Ngenxa yoko, ndizalise zonke iifowuni zefowuni ngeglue, ndishiye iindawo ezingenanto zeeqhosha kunye nezixhuma. Sifaka iglue kumqolo wefowuni, yenza igridi yeglue, ukuze igcinwe ngokukhawuleza kwicala. Sihamba ngekhamera kunye nezibonda zesithethi, ukuze i-glue ingabonakali kwaye ayiphazamise umsebenzi wayo.
Iphulo lokusebenzisa i-glue kufuneka lifakwe ngamabhondi kunye neengqungquthela. Kule meko, ifilimu eneentsimbi zafakwa. Le fayili yahlulwa kwinqanaba lekhava yangemuva yefowuni kwaye ugciniweyo luhlanganiswe.
Izikrele ngokucokisekileyo kwaye zinciphise ifilimu yokutya ecaleni kwesikrini. Kwakhona, ukususa ikhava kwifowuni, ukucima imingxube yekhamera kunye nesithethi esandi.
Unokuyipopota ikhava kunye ne-nails polish, ngemibala enemibala emininzi, ngokufanelekileyo phakathi kweentsimbi kunye nemigqabi.
Isembozo sombhali wakho sikulungele. Unokuyithwala ifowuni yakho yefowuni kwimeko yokuqala, engabikho mntu uyaphinda.
Автор: Masha Kesh на 10:37
Ярлыки: i-Android, i-diy, i-iPhone, ifowuni, ityala, izandla, yenza